Ciidamo Gadoodsan oo qabsaday Saldhig ciidan, kuna qabsaday Gaadiid dagaal duleedka Boosaaso.
BOOSAASO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ciidamo gadoodsan oo katirsan kuwa Puntland ay qabsadeen saldhig ciidan oo kuyaalay deegaanka Kalabeyr ee gobalka Barri, masaafo dhan 60KM-na u jira xarunta Ganacsiga Puntland.
Ciidamadan ayaa qabsaday Saldhigan oo muhiim u ahaa ammaanka buuraleyda ay kudagaalamayaan Al- Shabaab iyo ciidamada Difaaca Puntland, waxaana ay ciidamadu la tageen gaadiid gaaraya 7 baabuurta ciidamada ah oo halkaas taalay.
Goobjoogayaal kusugan deegaanka Kalabeyr ayaa u sheegay Warsidaha PuntlandTimes in ciidamadaas ay la baxeen gaadiidkan, ayna mudo xanibaad kusoo rogeen gaadiidka rayidka ah ee wadada maraya, waxayna gaareen deegaanka lagu magacaabo Kala-dhacda ee gobalka Barri.
Maamulka gobalka Barri oo aan la xariirnay wey ka gaabsadeen ka hadlida arrimahan, waxaase warar ka madax banaan ay sheegayaan in ay ciidamadan ahaayeen kuwa ka careysan xabsiga lagu hayo Taliyayaashoodii.
Ciidamadan ayaa ka gadoodsan xariga Col, Cabdulqaadir Sumeysane taliyihii ciidamada Puntland ee buuraha Galgala iyo kuxigeenkiisii Col, Cali Jamhad, waxaana ay dalbanayeen mudooyinkii u dambeeyey in lasii daayo.
Saraakiishan ciidan ayaa la xiray markii ay gadood ciidan sameeyeen ciidamadan oo ka cabanayay in aan la siinin xaquuqdooda deegaanka Kalabeyr iyo duleedka magaalada Boosaaso.
DAAWO: Puntland miyey kasoo horjeedaa Mataalada G. Banaadir ee Aqalka Sare?